GAME OF THRONES ရာသီ ၈ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၃ ခု - ၇၃ အကောင်းဆုံးနှင့်ရယ်စရာအကောင်းဆုံး - သတင်း
Game of Thrones မှအကောင်းဆုံးမှတ်စုများ: Battle of Winterfell
ဤသည်တနင်္ဂနွေ Game of Thrones ရာသီ၏တတိယဇာတ်လမ်းတွဲကိုမြင်တော်မူ၏။ The Long Night ဟုခေါ်သောဤအဖြစ်အပျက်သည်ငါတို့အားလုံးကိုစောင့်မျှော်ခဲ့သည့် Winterfell ၏တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးအချို့ Thrones ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဂိမ်းသေသွားတယ် နှင့်အခြားသူများကိုသူရဲကောင်း status ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကြီးစွာသောရန်ပွဲနှင့်အတူ, ကြီးသော memes လာကြ၏။ ထပ်မံ၍ ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကတွစ်တာသည် Game of Thrones ရာသီ ၈ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၃ ခုနှင့်ပြည့်နေသည်။
Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲများသည်အဆိုးဝါးဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ အပိုင်း ၄ သည်ဤမျှဝေးဝေးပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ယခုအချိန်တွင် 73 အဆုံးစွန်သော Game of Thrones ရာသီ (၈) အပိုင်း (၃) မှတ်စုများကိုသင်ကြည့်ရှုပါ။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်အတွင်းသင်ရရှိရန်လိုအပ်မည့်တစ်ခုတည်းသောမှတ်စုများစာရင်း။ သငျသညျထင်လျှင် ဇာတ်လမ်းတွဲတ ဦး တည်းအပြီး memes နှင့် အပိုင်း ၂ ကောင်းသောခဲ့ကြသည်, ယခုအပတ်ရဲ့ memes ပင်ပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။
အားလုံးအကောင်းဆုံး Thrones ရာသီရာသီ 8 ဇာတ်လမ်းတွဲ3memes:
* သတိပေးချက် - ဤ Game of Thrones မှတ်စုများတွင်ဖျက်လိုဖျက်ဆီးများပါ ၀ င်သည်။
Melisandre ကိုဒီအဖြစ်အပျက်မှာအလင်းရောင် ၁၀၀ တိုးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #GoT pic.twitter.com/ngIQ5tHaDO
- Nora Dominick (@noradominick) ပြီလ 29, 2019
Kim က winterfell မှာသေတဲ့လူတွေရှိတယ် https://t.co/q9UKt4Tuj9
- osha (@oshawildling) ပြီလ 29, 2019
ညဘုရင်အတွက်စောင့်ဆိုင်း Bran #BattleofWinterfell #GamefThrones pic.twitter.com/0p8j8SKrP9
- Plaine Blaine (@PlaineBlaine) ပြီလ 29, 2019
အခြေအနေမပါဘဲရာသီ 8 ဇာတ်လမ်းတွဲ3လုယူသောသူ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/kglkflQwM4
- salman (@ salmanbutt_03) ပြီလ 29, 2019
Arya the Stretch My Hands ကုသမှုကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမကုသနိုင်ခဲ့ပါက #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/nG6yU1hh73
- Kale B (@thecalebchin) ပြီလ 29, 2019
ထိုနဂါးကိုချွတ်ပြီးမှညတစ်ညဘုရင် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/5zlfPEW97V
- အမ်မလီ (@emilymcdonL) ပြီလ 29, 2019
နောက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ဘူး။ Theon မှာအပြီးသတ်ရွေးနှုတ်ခြင်း arc ရှိခဲ့တယ်။ သူဟာပြပွဲရဲ့အမှားအယွင်းဆုံးနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ပါ။ သူဆုံးပါးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာတောင်သူ့ကိုကျွန်တော်အမြစ်တွယ်နေဆဲ။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/VLyOZdlctQ
- ဂျမေရီတိတ် (jtate_design) ပြီလ 29, 2019
The NightKing: pic.twitter.com/18YEo2faj7
- Beric Dondarrian ။ (@MidKnightGaz) ပြီလ 29, 2019
လာမယ့်အဖြစ်အပျက် winterfell ဂိုဏ်းပြန်လည် Arya fuckin ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူး #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #GoT #BattleOfWinterfell # GOTS8E3 pic.twitter.com/wQ3qgZHiv9
- Sachin Swain (@____swain) ပြီလ 29, 2019
• ၅၅ ရက်ကြာရိုက်ကူးခဲ့သည်
•အရှည်ဆုံး #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ အဖြစ်အပျက် (၈၂ မိနစ်)
•ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗွီသမိုင်းတွင်ရှည်လျားသောတိုက်ပွဲကွင်းဆက်နှင့် LotR ၏ Battle of Helm's Deep ထက်ပိုရှည်သည်
Miguel Sapochnik (Hardhome, Bastards ၏တိုက်ပွဲ) ညွှန်ကြားရေးမှူး။ pic.twitter.com/1eBPECtyFJ
- Thrones အချက်အလက်အချက်အလက် (@thronesfacts) ပြီလ 28, 2019
မိန်းကလေးများ Ass ကို Kick #AryaStark # GOTS8E3 pic.twitter.com/CReBWBcw9O
- Jessica Chastain (@jes_chastain) ပြီလ 29, 2019
- S7 (@ salhazmi2) ပြီလ 29, 2019
- LC (@ayyyxn) ပြီလ 29, 2019
#Theon အိမ် Greyjoy နှင့် House Stark ၏
'သေသောအရာကိုဘယ်တော့မျှမသေနိုင်' #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #BattleOfWinterfell pic.twitter.com/W0EdpVOCew
- Thrones အချက်အလက်အချက်အလက် (@thronesfacts) ပြီလ 29, 2019
WINTERFELL PLAYER အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏တိုက်ပွဲ -
Lyanna - 10/10
Theon - ၇/၁၀
Brienne - ၈/၁၀
Tormund - 8/10
ဂျေမီ - 6/10
Podrick - 7/10
ဂျောရာ - 9.5 / 10
ဆမ် - ၆.၅ / ၁၀
Greyworm - 9/10
The Hound - 6/10
Beric - 5/10
ပေးထားသော - 4/10
Jon - ၃/၁၀
Melisandre - 10/10
Arya - 3000/10 (ပွဲစဉ်၏လူ)
- Dagger Drop? (@jer ________ 8) ပြီလ 29, 2019
* သူတို့ဘ ၀ အတွက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတိုင်း။
- Hishaam (@ahmadhishaam) ပြီလ 29, 2019
မိခင် Fucking ကြယ် !!!!!!! pic.twitter.com/4ohUJSvp7z
- ko (@yallsomebitches) ပြီလ 29, 2019
ညရှင်ဘုရင်တစ် ဦး က 3-1 ခဲမှုတ် pic.twitter.com/YXlFWcHoMc
- ZRaw Targaryen (@ZRawTaroli) ပြီလ 29, 2019
Sansa နှင့် tyrion တို့သည်ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြောင်းကောင်းစွာသိပြီး crypt မှထွက်ခွာခဲ့ကြသည် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/r4RKgU2CrO
- ဟယ်ရီ (@KingKieft) ပြီလ 29, 2019
Jon ကနဂါးကိုတကယ်ကြည့်လိုက်ပြီး… #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/BtM4LBHIYn
- House of Stark ၏ကေး (@sayheykay_) ပြီလ 29, 2019
- ရှုပ်ထွေးသော (@Complex) ပြီလ 29, 2019
ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်ရာဇပလ္လင်၏ငါ့တန်ခိုးကြီးသောမိန်းမတို့အဘို့အလေးစားမှု #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #NotToday pic.twitter.com/HJSzhH8Jn7
- ကက်သလီလီ (@kathleenceralde) ပြီလ 29, 2019
ဤတွင်၏လုယူသောသူပါပဲ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို pic.twitter.com/MCBMN7QU61
- ချောင်ဟန်း (@BeCarefulWidMe) ပြီလ 29, 2019
အိမ်မှာ cersei: 'wow င် craaaaaaazy'
- အိမ်ပူပူပိုင်၏ Charlene (endgame saw) (@genderposer) ပြီလ 29, 2019
သူမဒီဇာတ်လမ်းကိုသူမပေါက်ကွဲစေခဲ့သည်။ စစ်မှန်တဲ့သူရဲကောင်း။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/5XPHGc7A2d
- Jake Metz (@jake_metz) ပြီလ 29, 2019
ညဘုရင် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/Jd6SUGfhig
- ဘရိုင်ယန် (@BrianButWithAnI) ပြီလ 29, 2019
တူရဲတိုက်သို့ပြန်လာ arya #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/RWUgqShn8I
- jordon (@jordziinho) ပြီလ 29, 2019
- roxane လိင်တူချစ်သူ (@rgay) ပြီလ 29, 2019
-? (@Mojiuche) ပြီလ 29, 2019
- မာ့ခ် Torrence (@marctorrence) ပြီလ 29, 2019
ယနေ့ည Daenerys ထက်ပိုကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်သောသူများ:
အိပ်ပျော်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကငါကို 'ရန်ပွဲ' ပေးနေတယ်
-The White Walker က Arya စာကြည့်တိုက်ထဲသို့ပစ်ချသောစာအုပ်နောက်ကွယ်မှပြေး
- အမ်မလီယိုရှီဒါ (@emilyyoshida) ပြီလ 29, 2019
ဒါပါ။ ဒါက tweet ပါ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #got #aryastark pic.twitter.com/NSurTXn2i3
- ??? ⎊ ????? ??????? (@spideyyverse) ပြီလ 29, 2019
Winterfell ၏တိုက်ပွဲကိုကြည့်ပြီးနောက်တီဗွီကိုပိတ်ထားသည် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/X7DFt0PxTy
- Naomi Kemp (@ Naomi_Kemp1) ပြီလ 29, 2019
အဆိုပါ Dohraki သူတို့ရဲ့မီးဓားနှင့်အတူတက်စီး
White Walkers: pic.twitter.com/dZMsoW3Cu7
- Lunden တံတားများ (@_lundenbridges_) ပြီလ 29, 2019
အကွာအဝေးအတွင်းည King ရဲ့စစ်တပ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အစမှာငါ့ကို #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/akZCDUQJOn
- Mary Beth (@LivinLikeMary) ပြီလ 29, 2019
လေထုထဲတွင် mj switch နှင့်အတူ arya !!!!
- Blake Griffin (@ blakegriffin23) ပြီလ 29, 2019
ညဥ့်ရှင်ဘုရင်ကိုသတ်ပြီးနောက် Arya #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/6w8msLLXWE
- Azor နို့နှင့်တူ Azor Ahai (@ beaneater6969) ပြီလ 29, 2019
ကျွန်ုပ်၌တီဗီရှိသလားသို့မဟုတ်ဤသည်မှာ GOT စစ်ပွဲလား? pic.twitter.com/IJxSwuodFz
- ပယင်း Ruffin (@ambermruffin) ပြီလ 29, 2019
- David Mack (@davidmackau) ပြီလ 29, 2019
theရာသတ်ပြီးနောက် lyanna #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/Pmtx24J70I
- norman fuck ဆိုတဲ့ rockwell (@ scotty_13_) ပြီလ 29, 2019
ဖွဲနှင့်ညဘုရင် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/P07rlkHDrL
- Kieran (@ultminatozakii) ပြီလ 29, 2019
ဤသည် shit wtf ဒါမှောင်မိုက်သည်။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/7ros9trDEu
- မMatthewဲအေချယ်ရီ? (@MatthewACherry) ပြီလ 29, 2019
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမြက်ပင်ကချိုင့်ခွက်လိုပဲ Bugatti နဂါးကိုကားရပ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
- Arya Stark၊ The Night Kingslayer (@tallasstaylor) ပြီလ 29, 2019
အသက်ရှင်ကျန်သူ Dothraki သည်အုပ်စုအားပြောပြရန်ထွက်ပြေးသည် pic.twitter.com/OqFRAyrK2l
- ဒီနည်းကိုမဟုတ်သောအိမ်လုပ် shit (@foreverignorant) ပြီလ 29, 2019
- Klaus..TheNaughtyOne? (@KlausSkul) ပြီလ 29, 2019
ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အဆုံးမှာငါ့ကို # GameofThronesseason8episode3 #NotToday pic.twitter.com/rYVrK8K5qF
-? (@KushKaneki) ပြီလ 29, 2019
Jorah Mormont မသေဆုံးခင်: pic.twitter.com/Y5MPjLqg97
- ဖခင်၊ သားနှင့် Holysmoke (@Brandon_TooICEY) ပြီလ 29, 2019
Arya သေတော့မည်မဟုတ်လော သူမကိုတစ်နေ့လုံးဆင်နွှဲပြီးကျင်းပခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမှားယွင်းသောလုံခြုံစိတ်ချမှုခံစားချက်သို့ဆွဲဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #DemThrones pic.twitter.com/kbfk8DvW5G
- DancingQueen (@BrownBratzDoll) ပြီလ 29, 2019
ငါ Arya သူသို့မဟုတ်သူမဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်သူမငါသူမ၏ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ယနေ့ညကောင်းသောသူလုပ်ခဲ့တယ်တူသောကြောင့်အသံ
- db (@tricotVEVO) ပြီလ 29, 2019
ညအချိန်၌ဘုရင်ကိုသတ်ခြင်းမှာ arya သည်သူမပြီးခဲ့သည့်ရာသီကလုပ်ခဲ့သည့် flippy flip ကိုသတိရစေသည်။ အရာအားလုံးထဲမှာ FORESHADOWING သည် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/kEKwCbEQPj
- ကက် (@kathleennwalker) ပြီလ 29, 2019
၏နောက်ဆုံးနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များစဉ်အတွင်း Cersei #GoT pic.twitter.com/xVgyj7n4mr
- Jᴀᴄᴋ? (@JackDMurphy) ပြီလ 29, 2019
ငါ Dothraki ဘယ်မှာသွားတယ်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေ pic.twitter.com/jwaRMN3qFt
- ကာရင် (@delgadokarinaa) ပြီလ 29, 2019
Bran: ဒီမှာ Aria၊ ငါ့ဘဝကိုကြိုးပမ်းစဉ်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီ Valerian သံမဏိဓားရှည်ကိုယူပါ။
Aria: အိုကေ၊ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ။
- Bevan McCrory (@BevanMcC) ပြီလ 29, 2019
အဆိုပါညဘုရင်က Arya #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/NweYyoRSJ3
- ren !!! (@laurendlaine) ပြီလ 29, 2019
လူတိုင်းတိုက်ခိုက်နေကြပြီးဒီနေရာကိုကျော်လာပြီး WiFi ရဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/OOuMDbsZNz
- ဒန်းနစ်စ် (Phatboy188) ပြီလ 29, 2019
Bran နှင့် Night King သည် ၄ ​​မိနစ်ခန့်မျှဤအမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ #DemThrones pic.twitter.com/zXhx3TfpsF
- ရက်စက်သော Bader Ginsberg (@tyelerrdurden) ပြီလ 29, 2019
ညဥ့်အခါရှင်ဘုရင်သည်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် Arya အချက်ပြ Bran pic.twitter.com/X4NOnkiK9t
- မိန်းကလေး (@scusemyfrenchhh) ပြီလ 29, 2019
Nah Whitewalkers သည်အဆိုးရွားဆုံးသောလူကြမ်းအဖြစ်ခံများဖြစ်သည်။ ငါလူမိုက်ကိုသတ်ရန်နှင့်သူတို့မဟုတ်ကြောင်းမြေယာခိုးယူဖို့ကြိုးစားနေဖြူဖပ်ဖြူရော, soulless, မျက်လုံးပြာမိကျောင်းစိတ်ကူးနိုင်ဘူး။
- Magician ?? ‍♂️? (@RizzyB_LA) ပြီလ 29, 2019
Arya သည် Jon နှင့် Daenerys ကိုနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့သည် pic.twitter.com/WomwvUNJoi
- Raptors ပန်ကာ (@ QasimOA99) ပြီလ 29, 2019
အဆိုပါည King ရဲ့လုံခြုံရေးတစ်နည်းနည်းနဲ့ Arya မှတဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် #ထီးနန်းများရဲ့ကစားပွဲ pic.twitter.com/3ZlYBh9QHu
- Dubuisson © (@ 13Dubuisson) ပြီလ 29, 2019
- ရာမန် (@kingxpanna) ပြီလ 29, 2019
Night King ဟာ ​​Arya လုပ်တဲ့နေရာမှာအဆိုးရွားဆုံးလုံခြုံမှုကိုရခဲ့တယ်
- SoleFinesse (@ KingofJerzey1) ပြီလ 29, 2019
- ပေတရု (@ pe17er) ပြီလ 29, 2019
- သင် Winterfell ၏ Battle အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
- Zahraa Wehbé (@zhwehbe) ပြီလ 28, 2019
တခြားသူတွေသေဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေချိန်မှာစာသား cersei pic.twitter.com/AtjslXw13Z
- yohana desta (@yohanadesta) ပြီလ 29, 2019
Twitter of Thrones ကိုမကြည့်တဲ့သူတွေ၊ pic.twitter.com/GgbvS5mNfm
- ကရင် Howell (@karenehowell) ပြီလ 29, 2019
- အိုင်ဗင်မိုင်နာ (@IvanIMaina) ပြီလ 29, 2019
Arya ကသူမအဖြူရောင်လမ်းလျှောက်သူများကိုမည်သို့သတ်ခဲ့သည်ကိုပြန်ပြောပြသည်။ pic.twitter.com/ViuZR3Y2k5
- ယူဆွတ်ဂါဟာရီ (@Yusuf_Ghauri) ပြီလ 29, 2019
Game of Thrones ရာသီရှစ်ခု၊ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးခုနှင့်မည်မျှဇာတ်လမ်းတွဲများရှိသနည်း။
ရာသီရှစ်ကြိမ်မြောက် Game of Thrones ဇာတ်လမ်းလေးသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနံနက် ၉ နာရီတွင်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်အမေရိကန်၌ HBO တွင်ထုတ်လွှင့်မည်။ ယူကေတွင်ဤသည်သည် hard core ပရိသတ်များအတွက် ၂ နာရီမနက်ကဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Sky Atlantic တွင်ပြသပြီးတနင်္လာနေ့ညနေတွင်ထပ်မံပြုလုပ်သည်။ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲအားလုံးကို Now TV တွင်လည်းလွှင့်နိုင်သည်။
အကယ်၍ မင်းကဒီလောက်ကြာကြာမစောင့်နိုင်ရင်၊ လာမယ့်သီတင်းပတ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်နောက်တွဲဇာတ်လမ်းကပြဇာတ်ဟာပြီးသွားပါပြီ။
ရာသီသစ်တွင်ဖြစ်စဉ်ခြောက်ခုရှိလိမ့်မည်။ တစ်နာရီကျော်ကြာမြင့်သောအားလုံး , ပြီးနောက် အပြည့်အဝအရှည်, နောက်ကွယ်မှမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် !!!
• Game of Thrones ရာသီမှအကောင်းဆုံးအမှတ်တရ ၅ ခုသည်ဇာတ်လမ်းတွဲနှစ်ခုဖြစ်သည်
• ဤသည် Winterfell of Thrones Battle of Game တွင်သေဆုံးသွားသောလူတိုင်းဖြစ်သည်
• Cersei နှင့်ပတ်သက်သောဒီ Thrones သီအိုရီကသင့်စိတ်ကိုနှောက်ယှက်စေလိမ့်မည်။